Maitiro Ekubhururuka anogona kuve Dombo repakona reUK reGreat Britain vavariro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » Maitiro Ekubhururuka anogona kuve Dombo repakona reUK reGreat Britain vavariro
avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Heathrow Airport, cargo terminal, CargoLogicAir Boeing 747-83Q (F) mukati mekutakura zvinhu, Chikunguru 2017.
Tsvagurudzo nyowani inoratidza kuti UK ingazoita sei hupfumi pivot post-Brexit, nekutengeserana kusiri kweEU kungangowedzera ne20% mumakore mashanu anotevera kubva pamadhora mazana mana nemakumi mana nemazana mana emadhora mu473 kusvika pa2019 mabhiriyoni mu570.
Chirevo chitsva cheECBR chinoratidza mashandiro anoita avhiyesheni angave dombo repakona rezvido zveUK zveBritain zveBritain, zvichibatsira indasitiri kununura £ 204bn bhizinesi bonanza iyo inogona kubatsira kona yega yega yeUK
Heathrow, iyo yatove inofambisa ingangoita hafu yezvose zveku UK zvekutengesa nemutengo pamwe neCPTPP nyika, yakanyatsoiswa kubatsira maUK mafemu pivot nekukura kutengeserana neakakosha hupfumi post-Brexit.
Kutengesa kune dzisiri nyika dzeEU kuburikidza neHeathrow kunogona kukura ne11% na2025 nematunhu ane hunyanzvi hwekugadzira, kusanganisira iyo North East neMidlands, yakagadzirirwa kubatsira zvakanyanya sezvo UK inotanga hukama hutsva hwekutengesa.
Sekureva kweCentre for Economics & Bhizinesi Rekutsvagisa, kubhururuka kunofanirwa kunge kuri pamoyo peiyi pivot. Zvakawanikwa zvinoratidza kuti kukosha kwekutengeserana kuburikidza neHeathrow kune dzisiri nyika dzeEU kunogona kuwedzera ne11% na2025, nepo kutengeserana nenyika dzeEU kuchidzikira ne7% panguva imwecheteyo. Madunhu eku UK angabatsirikana neaya matsva ekutengeserana ma link, naHeathrow achitamba basa rakakosha mukuvhura misika mitsva inokosha kubva kuAsia Pacific neAustralia kuenda kuUS.
Kubhururuka kunokosha kuzvirongwa zveHurumende zveGlobal Britain post-Brexit. Heathrow chete ane mukana wekuti aite mari inosvika mabhiriyoni makumi maviri nemana emabhizimusi ekutengesa bonanza achibatsira mabhizinesi eBritish mukona dzese dzenyika, achigadzira mikana kubazi rese rezve ndege uye nekusimbisa network yekutengesa yeUK.
Nekudaro, uku kuwedzera kwekutengeserana hakuzoitike kunze kwekunge indasitiri yeku UK yekufambisa ndege ichitsigirwa nemitemo yeHurumende uye ichibvumidzwa kutangazve. Maindasitiri manhamba aMay anoratidza kuti vamwe vevakwikwidzi vekuEurope avo vakabatsirwa nerutsigiro rwechikamu panguva yedenda, seNetherlands neGerman, vari kuona kukura kunokurumidza. Cargo tonnage kuUK hub hub yendege ichiri pasi 19% pamatanho e2019, zvichienzaniswa neSchiphol neFrankfurt dzakapfuura mazinga avo e2019, dzichikura ne14% uye 9% zvichiteerana panguva imwecheteyo nguva.
Tsvagiridzo iyi inouya apo Heathrow anoshanda neBritish Airways neVirgin Atlantic kuvhura miedzo inovavarira kubatsira Hurumende nemaindasitiri kunzwisisa nzira dzekurerutsa zvirambidzo zvevachekeri vakazara, danho rinova kiyi yekutangazve kufamba nekutengesa. Nekushandisa muhomwe yemari yekudzivirira nyika, makurukota anogona kubatsira kuendesa kukurudzira kwehupfumi kune vanotengesa kunze kwenyika muBritain, vachivimbisa kuti UK inoramba ichikwikwidza sezvo nyika ichibuda mukukiya.
Chirevo cheGlobal Britain chinoratidza kuti:
Pakazosvika 2025, kukosha kwekushambadzira kuburikidza neHeathrow kunogona kukura kusvika pamadhora zviuru makumi maviri nemana (kubva paUS $ 204bn muna188), zvichimiririra 2019% yekutengesa kwese kweUK muzvinhu uye 21.2% yekutengesa kwedu muzvinhu nemasevhisi.
Kukura kwekutengeserana kunogona kukurudzira chikamu chese cheUK. Madunhu ane hunyanzvi hwekugadzira - kusanganisira Midlands neNorth East - angangobatsirika zvakanyanya kubva kuzvibvumirano zvekutengeserana mune ramangwana neupfumi huri kukura pasi rese. Scotland neWales zvinogona zvakare kubatsirwa nekuwedzera kutengeserana mune zvekurima, masango uye hove.
Heathrow inogona kubatsira kutyaira Mahara Mahara Zvibvumirano Zvekutengeserana - iine 46% yekutengeserana nemutengo pamwe neCPTPP nyika dzakagadziriswa kuburikidza nendege - nepo nhandare ichiiswa kuti iite basa rakakura mukubata neUS neAustralia.
Heathrow ndiye mutungamiri mukuru weUK yekudyara accounting yezvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevatengesi vese vanotakurwa nemhepo kuUK (nemutengo), uye huwandu uhu hunokwira kusvika pamusoro pe75% yekutengeserana isiri yeEU.
Nepo 90% yekutengesa kweUK nevhoriyamu ichifambiswa negungwa, zvakakoshesa zvinhu zvinotakurwa nemhepo. Heathrow ndiyo chiteshi chikuru cheUK nekukosha, ichiverengera 21.2% yekutengesa kweUK muzvinhu nemutengo mu2019.
Tsvagurudzo nyowani iyi inosimbisa kukosha kweiyo yepasi rose hub airport modhi kuUK post-Brexit uye kune veBritain vanofarira kunze kwenyika vanovimba nenzira dzekutengesa ndege. Iyo hub modhi inobatsira kuendesa kutengeserana kukura, nekubatanidza kudiwa kwekubatana kwepasirese uye nekupa yakawanda sarudzo yenzvimbo dzevapfuuri, mabhizinesi uye vezvemabhizinesi, vekunze uye vekunze.
Mukuru weHeathrow John Holland-Kaye akadaro: “Heathrow akaiswa zvakanaka kuti awedzere zvishuwo zveHurumende zveGlobal Britain uye aunze kusimudzira, mushure meBrexit yekusimudzira hupfumi yakakosha mabhiriyoni epondo. Sekungove chete hub yendege yekuUK uye chiteshi chikuru nekukosha, isu takagadzirira kutamba chinhanho chepakati mukugadzira mikana yezvehupfumi kumabhizinesi kutenderera nyika, tichifambisa zvibvumirano zvitsva zvebhizimusi remahara uye kushanda sehukama hwakakosha kune vatinoshanda navo vatengesi. Makurukota anofanirwa kutora mukana wekuchengetedza hupfumi hwakakosha nekutsigira chirongwa chekubatsira vanhu kubritish nekurerutsa zvirango zvekufamba kwevakabayiwa zvizere kubva muna Chikunguru 19. ”
Gurukota rezvekutengesa kunze kwenyika Graham Stuart MP akataura kuti: "Sezvatinoramba tichiratidzira zvibvumirano zvekutengeserana pachena nenyika nenyika dzepasi rese, nhandare dzedu dzichaita basa rakakosha muzvishuwo zvepasi rose zveUK - kubva pakuvamba kwedu kuenda kuCPTPP kusvika pachibvumirano chekutengeserana cheUK-Australia chichangobva kusainwa.
“Hurongwa hwedu hwezvekutengeserana hunobatsira kukwirisa matunhu ese eUK, kudzikisa mitero uye kucheka red tape kumabhizinesi. Tsigiro kubva kubazi rezvemhepo ichabatsira kuita izvi, nekuona rwendo rwakareruka rwekutengesa kunze kwenyika kuUK kumisika yakakosha seNew Zealand, Middle East neIndia. ”
Tsvagiridzo iyi yakagamuchirwawo nemabhizinesi ematunhu, ne Dai Hayward, CEO weMicropore Technologies iri muTeesside, achiti: “Micropore Technologies Ltd inopa mubairo-inopa tekinoroji mvumo kune vese vezvemishonga uye biopharmaceutical chikamu. Nekuda kwehunhu hwepasirese hwebhizimusi redu rakanyatsobatana nhandare yendege yevafambi nevekutakura zvinhu yakakosha. Heathrow inopa chaizvo izvi, kunyanya izvozvi kuti nendege dzezuva nezuva kubva kunhandare yendege, Teesside International, dzatangazve nekuda kweTee Valley Meya, Ben Houchen's, kuedza. "Tine tarisiro yekukwanisa kutangazve kufamba kubva kuHeathrow kuenda kunzvimbo dzepasi uko tekinoroji yedu yakaenda mukati medenda."
Kuratidzira basa remabhizinesi eBritish kumusoro nekudzika nyika iyo inotengesa kunze kwenyika zvinhu zvavo nemasevhisi kuburikidza neHeathrow, nhandare ichave iri kuvhura chirongwa cheGlobal Britain Bhizinesi reMabhizimusi mumwedzi iri kuuya. Aya mabhizinesi akachengeta nyika ichitengesa pamusoro pegore rapfuura uye vakagadzirirwa kutamba chinzvimbo chikuru mukutyaira pasi rose Britain mumakore anotevera.